သိပ္ပံ ဆိုသည်မှာ အင်္ဂလိပ် အခေါ် ဆိုင်းရင့်စ်(Science) ( လက်တင်(Latin) ဘာသာစကား စီရန်ရှား မှဆင်းသက်လာသော စကားလုံးဖြစ်ပြီး ဗဟုသုတ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။) ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေနှင့် စကြာဝဠာ အကြောင်းများကို ခန့်မှန်းခြင်းများ၊ ရှင်းလင်းခြင်းတွက်ချက်ခြင်းများ၊ စမ်းသပ်ခြင်းများ၊ တီထွင်ခြင်းများ စသည် ဖြင့် ဗဟုသုတများစုစည်းတည်ဆောက်ထားသော၊ စံနစ်တကျဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ကိုင်ရသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ 
သိပ္ပံပညာဆိုသည်မှာ သဘာဝတရား၏ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုတို့နှင့် ထိုဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲမှုတို့၏အကြောင်းအကျိုးအမှန်တို့ကို နည်းစံနစ်ကျနစွာလေ့လာအသုံးချနိုင်သောပညာရပ်ကို ဆိုလိုသည်။ သိပ္ပံပညာသည်နည်းစံနစ်ကျန၍ခိုင်မြဲတိကျရ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မွေးကတည်းကစ၍ ပတ်ဝန်းကျင်၌ဖြစ်ပျက်လျက် ရှိသောဒြဗ်တို့၏အလယ်၌ နေခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ အာရုံခံစားတတ်သည့်အရွွယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြင်၊ အကြား၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့၊ အထိတည်းဟူသော အာရုံငါးပါးနှင့် တဖြည်းဖြည်းခံစားတတ်လာကြလေသည်။
ထိုအတူပင် ကမ္ဘာဦးကတည်းက လူတို့သည် ကမ္ဘာ လောက ကြီးအတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသမျှသော အကြောင်းအရာ တို့ကို အာရုံငါးပါးနှင့် ခံစားတတ်လာကြသောအခါ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတ္ထုဒြဗ်တို့၏ ဂုဏ်သတ္တိတို့ကို နားလည်သိရှိလာခဲ့ကြလေသည်။ အို နှင်းဆီပန်းကလေးနှယ်လှလိုက်တာဟု ဆိုလိုက်သောစကားလုံးများမှာ နှင်းဆီပန်း၏အလှကို စက္ခုအာရုံနှင့်ခံစားမိရာမှဖြစ်ပေါ်လာသော စကားလုံးများပင် ဖြစ်လေသည်။ နှင်းဆီပန်း၏ရနံ့သည်မွှေးမှန်းသိသကဲ့သို့ပင် နှင်းဆီပန်းအခက်မှ ဆူးတို့သည်နာကျင်စေတတ်သည်ကိုလည်း ခံစားနိုင်ခဲ့ကြသည်။ သစ်သီးပင်မှသစ်သီးသည်ချိုမြိန်မှန်းကို လည်းသိရှိလာခဲ့ကြ၏။ သောတအာရုံအားဖြင့်ခြင်္သေ့ဟောက်သံ၊ ကျားဟိန်းသံ စသည်တို့ကိုလည်း သိလာခဲ့ကြလေသည်။ ဌိုအခါလူသည် ထိုအာရုံငါးပါးနှင့်ခံစားမိသည့်အချက်တို့ကို စုပေါင်း၍ သူ့၌အသိဉာဏ်ကိုရရှိလာလေသည်။
သိပ္ပံပညာတိုးတက်လာမှုမှာမြေကြီးထဲမှ ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာသည့်ပဒေသာပင်ကဲ့သို့မဟုတ်ပေ။ အရာဝတ္ထုနှင့်သက်ဆိုင်သော နိယာမများကိုလေ့လာရှာဖွေရာမှ တဖြည်းဖြည်းနှင့် သိပ္ပံပညာနယ်သည် ကျယ်ဝန်းသည်ထက် ကျယ်ဝန်းလာခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် သိပ္ပံပညာသည် မည်မျှနက်နဲကျယ်ဝန်းလာသနည်းဟူမူ မည်သည့်လူတစ်ဦးတယောက်မျှ သိပ္ပံပညာအားလုံးကုန်အောင် နှံ့စပ်စွာတတ်ကျွမ်း နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ချေ။အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်သိပ္ပံပညာတွင် ပညာရပ်အမျိုးမျိုးပါဝင်၍ ပညာရပ်တစ်ခုစီသည်ပင်ကျယ်ဝန်းလှသဖြင့်သီးခြားလေ့လာသင် ကြားရန် လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ ဇီဝဗေဒကို တိရစ္ဆာန်တို့နှင့်ဆိုင်သော ပါဏဗေဒနှင့် သစ်ပင်တို့နှင့်ဆိုင်သောရုက္ခဗေဒဟူ၍ နှစ်ပိိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ပါဏဗေဒအောက်တွင် တစ်ဖန် ငှက်များနှင့်သာဆိုင်သော ငှက်အမျိုးမျိုးအကြောင်းပညာဟူ၍ သီးခြားတစ်ဘာသာ ခွဲထားရပြန်လေသည်။
သိပ္ပံပညာရပ်များတွင် ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ နက္ခတ္တဗေဒ၊ စသည့်ဒြဗ်နှင့်ဆိုင်သော သိပ္ပံပညာရပ်များ ပါဝင်သည်။ ရူပဗေဒသည် အပူ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ အလင်း စသည်တို့၏အကြောင်းများနှင့် ဒြပ်တို့၏အကြောင်းအရာများ ကိုပြဆိုသော သိပ္ပံပညာရပ်ဖြစ်လေသည်။ သိပ္ပံပညာတွင်ပါဏဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒ၊စသည့် ပညာရပ်များမှာ သီးခြားအကြောင်းအရာများဖြစ်သည့် ပညာရပ်များဖြစ်၍ သင်္ချာနှင့် ယုတ္တိဗေဒတို့မှာ အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးနျင့်သက်ဆိုင်သည့် ပညာရပ်များဖြစ်သည်။
သိပ္ပံပညာ၏ တတိယ ကိုင်းခွဲဖြစ်သော မူရင်း သိပ္ပံပညာ ခေါ် သင်္ချာသည် သဘာဝ သိပ္ပံပညာ၊ လူမှု သိပ္ပံပညာ နှစ်ခုလုံးနှင့်ပင် တူညီမှုရှိသလို ကွဲပြားမှုများလည်းရှိသည်။ လက်တွေ့ သိပ္ပံပညာကဲ့သို့ ယထဘုယ ကြမှုကို အခြေခံပြီး စနစ်ကြသော လေ့လာမှုများမှ ရရှိလာသော အသိပညာ ဖြစ်သည်မှာ တူညီကြသည်။ ကွာခြားချက်မှာ ဖြစ်ရပ်ကို သုံးသပ်ရာတွင် လက်တွေ့ ဖြစ်ရပ်ကို မသုံးပဲ မူလ အဆိုပြုချက် ကိုသာသုံးသည်။
↑ Fleck, Ludwik (1979). Genesis and Development ofaScientific Fact. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0226253252.
"https://my.bywiki.com/w/index.php?title=သိပ္ပံပညာ&oldid=375841" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၇၊ ၁၁:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။